ị bụ ebe a: Home Hair Care Ụmụ nwanyị ịkpụ ntutu – otú ịhọrọ?
Tufuo nsogbu echiche, ọ bụghị otú siri ike.
Ọ bụ iji na-agụ di na nwunye nke ìhè nke iwu nke ụmụ nwanyị haircuts: aha ke price nke ọ bụla idozi isi Ụlọ Mmanya a anaghị adịcha mfe icheta, ma ụkpụrụ ndị bụ isi ị na-amụta na-enwe ike ịkọwa, ị chọrọ ịhụ on your isi.
Ọ dị mkpa iji chọpụta, ihe ụdị onye ị nwere. Nke a bụ ụkpụrụ mbụ. Your eke udi nke ihu-ekpebi nhọrọ nke si edozi isi, ebe a na ihe niile doro anya: na, na bụ a girl, Ọ na-ese kpamkpam nke ebe gaa ebe ọzọ.
E nwere ise ụdị mmadụ: elongated, square, zita, oval na gburugburu. Kpebisie ike na gị ụdị onye pụrụ ịbụ na-eso ụzọ: Iji mee nke a, wepụ ihe ntutu azụ na ogwe aka na a pensụl. Ị pụrụ a adụ eyeliner ma ọ bụ brow na gburugburu na mirror ngosipụta nke iru-ya. ime eme? Ugbu a mfe chọpụta echiche na gị ụdị.
Oval ihu - a classic ikpe, nke zuru okè dabara ọ bụla edozi isi. Nke a nwere ike ịbụ oké ogologo ma ọ bụ obi ike ebinta.
Gburugburu ihu si edozi isi na uwe steepụ, ị nwere ike họrọ nkezi ogologo (e.g., ịkpụ ntutu cascade), rachighaa na bangs rue akuku (Bob na bangs), ma ọ bụ Anglịkan - ka mkpa si. Zere chemical zavivok na iwepụ ewepụghị ogologo bangs.
The zita ụdị onye nwere a rọrọ udi na-eji ire ụtọ dị iche iche. The zuru okè ka onye dị otú ahụ ga-aghọ a ọnụ ọnụ ịkpụ ntutu na a lush olu. Ọ bụrụ na ndị ihu a bit ihere - lezie anya asymmetrical na mkpumkpu haircuts.
Square ụdị ihu dị mma bughi ịkpụ ntutu. Nke a pụrụ isi kwuo ya nwere ike nweta na-enyemaka nke ìhè ebili mmiri nke dị iche iche ogologo strands. Onye dị otú ahụ ga-emebi ọbụna n'etiti na ogologo bangs.
Otú ọ dị bangs zuru okè elongated ihu - a na-anya belata nwere inwe a edozi isi. Ị nwere ike ịhọrọ a geometrically oge ufodu ma ọ bụ obere bangs.
Aha nwayi si edozi isi replete na di iche iche na oke, ma ọ bụghị na a ọsọ ọsọ na-ọsọ na-edozi isi na-a ịkpụ ntutu na otu, ha hụrụ na a magazine ma ọ bụ na foto. Achị abụọ - ekpebi ụdị nke ntutu gị.
Ka ịkpụ ntutu dina isi na-enweghị oké styling, Anyị mkpa ka a oyi n'ahụ na ụdị na Ọdịdị nke ntutu. Iji mee nke a dị gị mkpa naanị otu ntutu isi n'isi-ya. Ọ chọrọ ka sere na-akwa ndị: ma ọ bụrụ na i kwere mfe, Ya mere, i nwere mkpa ntutu. N'ihi ya, rigidity nke ntutu achọ ụfọdụ mgbalị, adọwa ya elu. Dị ka a na-achị - keisi ocha ntutu dị nnọọ mkpa, na ọchịchịrị - oké na ike.
Ọ dịghị mkpa na-ahapụ a mkpa ntutu ogologo, nke mere na bughi zuo ezu ha olu. Mgbakọ strands optimally ona obere haircuts, -ajụ ogologo si edozi isi. Ogologo ntutu isi ga-enye a zuru okè semisekel steepụ ịkpụ ntutu.
The nkezi Ọdịdị nke ahụ ntutu na-egosi ihe ọ bụla si edozi isi, karịsịa oké on ndị dị otú ahụ ntutu anya ragged ịkpụ ntutu. Oké isi bụ nnọọ ike inye ihe ọ bụla echichi na na-na ọjọọ udi, ya mere, ha dabara ịkpụ ntutu "nzọụkwụ", ma belata olu ike ga-enweta site ịkpachara anya tapering.
Mgbe niile na-a oke nke edozi isi jiri amamihe, ma nye udi nke ihu gị, na ajị Ọdịdị. Ọ na-adabere ọ, ịga nke ọma gị ụdi njem gaa omezi isi.
Trendy ntutu styling